Baaq Dallada SSE oo guul iyo gobanimo u aragtay in Madaxweynaha Somaliland go’aan kama dambeys ah ka qaatay in aanay Somaliland ka Qayb galeynin(MONDAY - 22/April/2013)
Dallada SSE oo ay ku bahoobeen jaalliyadaha ama ururada Somaliland ee Yurub, waxay baaqan ku hambalyaynaysaa kuna taageeraysaa qaraarka ay xukuumadda Somaliland ka qaadatay kulanka xukuumadda Ingiriisku ku qabanyso magaalada London, taariikhdu markay tahay 7 May 2013. Waa kulan loo qabanayo dalka Soomaaliya isla markaana guddoomintiisa ay daadihinayaan madaxweynaha Soomaaliya iyo Raysal Wasaaraha waddanka Ingiriiska. Hambalyadani waa mid si gaara ugu wajahan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland (Mudane Axmed Maxamed Maxamuud). Si guudna u hambalyaynaysa Golayaasha Qaranka, Axsaabta Siyaasayada iyo dhammaan dhinacyada si toosa iyo si dadbanba uga qayb qaatay taageerada go’aankan geesinimada leh.
Sida aad la socotaan Dallada SSE, waxay hore uga soo saartay talooyin ay la wadaagtay xukuumadda Soomaliland, kuwaasoo ujjeeddooyinkoodu ahaa in aan sinaba looga qayb qaadan kulankaa maadaama aanu sinaba u khuseyn danta dalka iyo dadke reer Somaliland isla markaana taxanaha ajandaha kulanku uu yahay mid gebi ahaanba ku jaan go’an arrimaha waddanka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya. Aragtida Dallada SSE waxay ku salaysneyd in kulanku uu yahay mid 100% lagu xaalaynayo arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya isla markaana ka qayb galkiisu ay kaaraamo iyo sumcad daro ku aheyd Somaliland.
Go’aanka kama dambeysta ah ee Madaxweynaha Somaliland uu ka qaatay kulankaa ka qayb galkiisa Dallada SSE waxay u aragtaa:
-Inuu yahay go’aan garab siiyay wixii ummadda reer Somaliland ay isku raaceen markii ay la soo noqdeen qaranimadooda.
-Waa go’aan adkeynaya midnimada isku duubnida dadka reer Somaliland.
-Dallada SSE waxay u aragataa inuu go’aankani adkeynayo aaminadaa shicibka reer Somaliland ay ku qabaan xukuumaddooda isla markaana ay xoojinayso sumcada iyo karaamada xukuumadda Somaliland.
-Dallada SSE waxay u aragtaa in ka qayb galka kulankaasi uu dhaawac ay adagtahay sida looga soo kabto uu u geysan lahaa qaranimada iyo dowladnimada aynu ku taamayno, isla markaana jaahwareer uu gelin lahaa toobiyaha cad ee aynu maanta u marayno ka midho dhallinta yoolka la higsanayo. Waa wax Ilaahay loogu mahadiyo go’aanka maanta laga gaadhay arrinkan oo ah mid u hiilinaya ka dhabeynta iyo ka midho dhallinta himilooyinka ummada reer Somaliland ay higsanayaan inay gaadhaan mustaqbalka dhow.
-Waa go’aan geesinimo isla markaana ay Dalladu u aragto inuu noqon doono g’aan la inagu ixtiraamo si cadna u muujinaya sida loogu adagyahay qaddiyada Somaliland shicib iyo xukuumadba.
Guud ahaan Dallada SSE waxay si dhow oo taxadar leh ula socotaa heerka xasaasiga ah ee ay galeen wadahadalladii labada dal Somaliland iyo Soomaliya, sidaa darteed waxay ku talinaysaa Dallada SSE in si midaysan loo waajaho geedi socodka iyo maraaxsiha ay wadahadalladani marayaan. Waa arrin loo baahanyahay in Golayaasha Xukuumadda, Axsaabta siyaasada, ururada bulshada iyo dhamaanba dhinacayada kale ee ay khuseyso loo baahanyahay in xukuumadda laga gacansiiyo wixii taageero iyo tallooyin ah ee loo baahdo.
Ugu dambeyn waxa aanu dhammaan Golayaasha Qaranka, Axsaabta siyaasada iyo guud ahaanba shicibka reer Somaliland ee qaaliga nagu ah aanu kula dardaarmaynaa in la adkeeyo midnimada iyo wada’jirka ummada reer Somaliland si looga gudbo duruufaha tirada badan ee inagu xeeran.
Gunaanad ahaan Dallada SSE waxay baaqan ku cadeynaysaa in wixii danta guud ee qaranimadeena wax yeelaya aan cidna looga gaban maadaama danta Somaliland ay wax walba ka mudantahay.
Guddiga fulinta ee dallada SSE.